ChaCha dị mma karịa Google? | Martech Zone
Sunday, Jenụwarị 24, 2010 Sunday, Jenụwarị 24, 2010 Douglas Karr
Dị ka ọtụtụ ndị folks, elelị m ike nke ChaCha. Ọtụtụ mmadụ chere na ChaCha bụ nnwale nzuzu. Ndị mmadụ ejirila egwuregwu ChaCha kpaa ọchị na-ele anya na Google ma na-aza ya.
Na-arụ ọrụ anya na Scott Jones na ChaCha na-ngwa-paced, ịma aka, fun… na-akwụghachi ụgwọ. ChaCha na-atụgharị nkuku… na ndị mmadụ amalitela ịma. Ọnwa na-abịa na ChaCha ga-abụ ọbụna ihe na-atọ ụtọ karịa nke ikpeazụ… nke a ka m kwere gị nkwa!
Ihe ChaCha chịkọtara bụ otu n'ime ajụjụ kachasị ngwa ngwa na azịza data na ịntanetị. Ajuola ụfọdụ ajụjụ ọtụtụ narị ma ọ bụ ọtụtụ puku oge… na ChaCha agakwaghị enyocha arịrịọ ahụ, ha nwere ike ịnye ya.
Nọmba ndị mara mma ịtụnanya… karịrị otu nde arịrịọ zara otu ụbọchị. Karịrị 4.5 nde Chuck Norris ọchị ọchị naanị! Ọ bụghị egwuregwu na egwuregwu niile. ChaCha nwere ezigbo oge azịza ya ihe na-eme na Haiti, Kedu nnukwu bu eluigwe na ala, ma ọ bụ azịza ndị dị irè dị ka esi nweta chịngọm nke ntutu gị ma ọ bụ adreesị ma ọ bụ akara ekwentị maka ụlọ ọrụ.
ChaCha.com na-aga n'ihu na-eto eto na okporo ụzọ - ọ bụghị naanị site na arịrịọ ziri ezi kamakwa site na engines ọchụchọ n'onwe ha. Ọbụna Google achọpụtala na azịza ChaCha dị mma - uto njin ọchụchọ na-aga n'ihu. Saịtị bu ugbua kasịnụ na ebe nrụọrụ weebụ Indiana maka ugboala ma nwee kariri otutu ndi mmadu na ndi mmadu na ndagwurugwu Silicon.
Jụọ ChaCha ajụjụ na-adịchaghị mkpa, ị ga-enwetakwa azịza mara mma! Gbalịa ya n'onwe gị site na izigara ajụjụ na 242242 ma ọ bụ kpọọ 1-800-224-2242 (242242 na-asụ ChaCha). Ma ọ bụ ịnwere ike ịnwale wijetị ọhụrụ m wuru na sidebar m. (Mara: A ka nwere ihe nhicha a ga - eme ya - dị ka ịchọpụta ihe kpatara na IE anaghị amasị ya oge ụfọdụ!).
Ọ bụ ezie na Google ejirila nchekwa data echekwara nke ọma ebe ịchọta azịza na Ịntanetị, ChaCha achọtala azịza ya. Nke ahụ adịghị mfe. Ka nchekwa data ahụ na-abawanye na ọnụọgụ ndị ọrụ nke sistemụ ahụ na-eto, ị ga-ahụ ọkwa nke nzaghachi na-etokwa. O zughi oke - mana ChaCha bụ ngwa ọrụ, ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe n’ụzọ ziri ezi, nwere ike ịbụ nnukwu uru ịnwe!
ChaCha nwekwara nghọta n'ime usoro (n'aka ekpe bụ dashboard nke m wuru). Omume Twitter bụ ihe ndị mmadụ na-ekwu maka ya, ọnọdụ Google bụ ihe ndị mmadụ na-achọ ịchọta… na ChaCha nwere ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ. Nke ahụ bụ ezigbo ozi bara uru - ihe ChaCha na-amalite ịchọpụta. N'ezie ọ bụ eleghị anya ihe Jones et Investors ghọtara n'oge niile.
Ngosipụta zuru oke: ChaCha bụ isi ahịa nke m.
10 Teknụzụ Blog nke ị maghị
Jan 25, 2010 na 8: 54 AM
M na-eleda Cha-Cha anya mgbe mbụ ha malitere. Agbanyeghị, n'ikwu nke a, ha nwere ụzọ ha ga-esi. Aghọtara m na ha nwere nnukwu ajụjụ a jụrụ na ha nwere ike isi na ya pụọ, mana nsogbu m zutere bụ mgbe ụfọdụ ọ bụghị azịza ziri ezi ma ọ bụghịzi mkparịta ụka na ezigbo mmadụ. Naanị ihe ha na-eme bụ inye gị ihe ha chere bụ azịza kachasị mma n’agbanyeghi na ọ bụghị ihe ị jụrụ.
Ajụjụ: Mmiri mmiri ozuzo ọ bụla dakwasịrị ikuku ihu gị ma ọ bụrụ na ị na-anya ọsọsọ ma ọ bụ nwayọ:
A site na ChaCha: Drikwọ ụgbọala ngwa ngwa ga-eme ka ọsọ ọsọ nke mmiri mmiri ozuzo megide ụgbọ gị ma nwee ike dị ukwuu iji wepu unyi.
Ọ bụghị kpọmkwem ihe m jụrụ, ọ yighịkwa ka ọ bụrụ na ọ nwere mkparịta ụka ọ bụla maka mkparịta ụka yabụ sochie ajụjụ ndị a enweghị ọnọdụ ọ bụla.
Agbanyeghị, ha na-arụ ezigbo ọrụ n'ozuzu ha, ha nwere ọrụ ha ga-arụ na algọridim ha ma nwee ike iweghachi ụfọdụ mmetụ mmadụ na ya.
Jenụwarị 25, 2010 na 2:21 PM
Daalụ maka ihe Blake kwuru!
ChaCha na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na Ntuziaka ma chọpụta na mmekọrịta mmadụ na mmadụ ka dị mkpa na akụkụ. Ọtụtụ mgbe, ihe atụ m na-ahụ ebe ChaCha enyebeghị azịza dị mma abụghị ezigbo ajụjụ. Ọ dịghị mmejọ na gị, n'ezie, mana nke ahụ ọ bụ n'ezie ajụjụ ị ga-ajụ ChaCha? Ka ị̀ ga-eleru anya ka ị na-anya ụgbọala. * DONT_KNOW *
You jụrụ Google otu ajụjụ ahụ? M na-ahụ nsonaazụ na Otu esi zere Moose na nkwekọrịta! Ma ọ dịkarịa ala ChaCha dị nso!
Ekwenyere m na ọmarịcha ụtọ ChaCha bụ ajụjụ nwere azịza nwere oke nke anyị na-agaghị achọta na igwe nchọta ihe.
Feb 1, 2010 na 12:03 PM
“Ọnụ ọgụgụ ndị ahụ dị ịtụnanya? ihe karịrị otu nde arịrịọ zara otu ụbọchị. Ihe karịrị 4.5 nde Chuck Norris ọchị njakịrị naanị! ”
4.5 nde n'ozuzu ma ọ bụ nke ahụ bụ nde 4.5 nke nde 1 kwa ụbọchị? 😉
Feb 2, 2010 na 10:14 PM
Na 4.5 nde oge niile! 😛